PEAR PERUN: SHARAXAADA KALA DUWAN IYO SAWIRIDA MIRAHA, ASTAAMAHA IYO SIFOOYINKA BEERASHADA - BEERTA
Mid ka mid ah noocyada kala xulashada Altai - pear Perun
Warshadani waxay magaceeda u bixisaa magaca Ilaaha Quduuska ah ee Qorraxda ka soo horjeeda gabayada qadiimka ah ee Slavic. Waxaa laga yaabaa in tani ay tahay abaalmarin loogu talagalay qoraaga luuliyo pearl buugii hore ee khudradda Slavic.
Laakiin si kastaba ha ahaatee, magaca miraha miraha, taas oo laga wada hadli doono, waxay aad ugu dhowyihiin darraanta gobolka ee uu koray. Gobolkaasi waa Siberia, taasina waxay dhan tahay.
Waxay ku jirtaa xaaladdeeda cimilada adag oo aan habboonayn (ugu yaraan marka la eego isteroberi kuleylka, oo qeexaya) fasalka "Perun" Waxay muujinaysaa si fiican iyo wax soo saarka, sii dheer ee maqaalka sharaxaad of agrotechnics, sawirrada miraha iyo beeraha dib u eegis.
Midabkani waa pear. nooca dayrta ee xilliga dayrta. Si aad u bislaan miraha ay ka bilaabato badhtamaha October. Nidaamka Bisaylkiisa ugu dambeeya ee miro ayaa sii soconaya muddo wakhti ahna wuu dhammaanayaa bilawga ah ee barafka ugu horeeya.
Marka lagu kaydiyo pear pear pear noocyo "Perun" ha luminin xaaladahooda dibedda iyo dhadhanka illaa bisha Janaayo.
Halkan waa in aan maskaxda ku heyno in qulqul-darrida cambaaraynta geedka ee geedka ay tahay mid xaqiiqda ah in miraha ay lumiyaan qaar ka mid ah faa'iidadooda. Bannaanka u khibrad badan iyaga ka saar 8-10 maalmood ka hor qaangaarka ugu dambeeya. Ka dib markii jiifa ka dib markii la soo saaro dhowr maalmood, waxay noqdaan kuwo ka sarreeya marka loo eego isbeddelada geedku ku soo dhacay.
Bere Bosk, Uralochka, Silent Don, Svetlyanka iyo quruxda Samara waxay sidoo kale ka mid yihiin noocyada dayrta.
Waxaa jira hal dheeri, "farsamo", sababtoo ah sababta miraha u bislaaday waa in laga saaraa dhowr maalmood ka hor inta aysan dhicin kama dambeysta kama dambaysta ah.
Sida caadiga ah, dhamaadka wareegga Baaskiilka, isteroberi ee Perun noqdaan aad u culus miisaanka. Miraha noocaas ah waxay dhacaan dabayl Aad u fududahay inaad u burburto, iyada oo aan qorin dhadhanka wanaagsan ee macquulka ah.
Isla mar ahaantaana, dhaqanka pear this iska leh dhirta miro-self-infertile. Iyadoo la tixraacayo qaybtan ayaa muujinaysa in geedka aan awoodin in ay si firfircoon iskood u-pollinate manka u gaar ah.
Si loo xaqiijiyo shakhsiyaadka "Perun" bacriminta caadiga ah iyo wax-soosaarka la aqbali karo, meel u dhow waxaa lagama maarmaan ah in la beero laba ama saddex pear pollators, blooming waqti isku mid ah. Waxay siin doonaan geed leh iskutallaabin iskutalaab ah.
Taariikhda ku-dillaaca iyo gobollada taranta
Noocyo ku'saabsan Perun ayaa la nadiifiyey ee jardiinooyin tijaabo ah ee Machadka Cilmi-baarista Dhammaan Ruushka ee Beeraha ee Siberia. M.A. Lisavenko (Barnaul) koox ka mid ah beeraha I. Puchkin (hoggaamiyaha kooxda), E. Karataeva, I. Kalinina, M. Borisenko.
Marka la abuurayo riwaayad, pear ka duwan kala duwan oo loo doortay No. 10821 ayaa loo isticmaalay (labada waalid waa "Gabadh" iyo "Bergamot"), kaas oo lagu gudbo fasal "Winter Deanka".
Dalaggu wuxuu ku jiraa kooxda noocyo kale oo lagu magacaabo Altai. Wadajir ahaan Perun, liiskan waxaa ka mid ah Svarog, Lel, Kupava iyo noocyo kale oo isteroberi ah, kuwaas oo si gaar ah loogu sameeyey xaaladaha cimilada ee cimilada ee beeraha beeraha ee Siberian.
Natiijo ahaan, pear lagu tilmaamay ayaa u muuqda in ay u adkahay qabow ka badan noocyo ee gobollada dhexe ee Russia, oo aan ka xun yahay tayada alaabta la soo ururiyey.
By habka, Slavic magacyo sharaf leh oo badan oo iyaga ka mid ah ma laha wax la sameeyaan hore u ah gen ee dhirta kuwaas. Waqtigaas, madax ka mid ah qorayaasha suxufiyiinta ayaa aad u jeclaa taariikhda iyo diinta ee hore ee Slavs, sidaas darteed Puchkin ee dareenka qiiro u leh taariikhda Ruushka, talooyinka qadiimka ah iyo legends ayaa loo wareejiyey pears uu abuuray by isaga.
Pear Perun 1994 ayaa loo diray tijaabooyinka gobolka. Diiwaanka Varietal State, waxaa si rasmi ah loogu soo daray 1998 Galbeedka Siberian iyo Bariga Siberian gobollada beeraha.
Waxaa xusid mudan in ay isku dayeen in ay gobolada kala duwan gobolada waqooyiga Siberian (gaar ahaan gobollada Novosibirsk, Tomsk iyo Kemerovo) aan lagu guuleysan.
Maaddaama qaababka dhismaha ee laamaha, sharaxaadda dibadda iyo sawirada taas oo mar dambe ku jirta maqaalka, pear varieties kala duwan Perun dhaqdhaqaaqa ma awoodo in ay u dhali midho ah ee aagagga dabiiciga ah ee dabiiciga ah.
Noocyo qabow u adkaysta waa Forest Beauty, Chudesnitsa, Yakovlevskaya, Otradnenskaya iyo Fairy Tale.
Qeexida kala duwan ee Perun
Kala duwan ayaa leh qaababka gaarka ah ee dibadda iyo dhismaha:
Geed Kobaca caadiga ah - dhexdhexaad ah, xaaladaha qaarkood oo leh jawi wanaagsan oo horumar leh ayaa laga yaabaa inay ka sarreyso celcelis ahaan. Jirrada waxaa lagu daboolaa jilicsan oo ah cagaar cagaaran ah.
Crown, laamo. Dhirta "Perun" waxaa lagu kala soocaa taaj sarreeya, oo leh muuqaal muuqaal leh, oo udhow geeska. Noocyada laamaha ah ma aha mid aad u cufan, dhumucduna waxaa lagu qiyaasaa dhexdhexaad.
Caleemaha. Hayso qulqul-xajin. Midabka ugu sarreeya ee caleemaha waa midab buni ah. Noocyada miraha waxay ku xiran yihiin inta badan kolchatka fudud iyo noocyo adag.
Leaves. In caleemaha bartamihii dhexe, sida caadiga ah, silhouette ukun-qaabeeya ballaadhan. Saxanka caadiga ah ee saxanka ayaa leh jaangooyo yar. Dusha sare ee saxanka waa u siman yahay taabashada. Xirmooyin adag oo ku dhawaad ​​cidhifka caleenta caleenta way ku dhow yihiin wax kasta oo cufan ah. Caleemaha waxaa lagu rinjiyeeyaa hooska madow ee cagaaran.
Inflorescences Caleemaha ubaxa "Perun" wuxuu ku bilaabmaa taariikhda dabiiciga ah.
Miraha. Dalagga dalaggu ka weyn yahay geed weyn, miraha dhexdhexaad ah iyo celceliska ka sarreeya (oo gaar ahaan sanadaha wanaagsan). Isla mar ahaantaana, pear celcelis ahaan geed ka mid ah geed miisaankoodu wuxuu u dhexeeyaa 140-170 g, inkastoo ay jiraan miro culus.
Muuqaalka caanka ah ee noocyada kala duwan, isla markiiba muuqda, waa asmmo yaraanta miraha sinnaan la'aanta ah, dusha sare ee inta badan lagu calaamadiyo tuberosity yar.
Ma aha mid cufan, cad, wax yar oo saliid ah, oo leh hadhuudh wanaagsan, saxarka ayaa leh caraf udgoon leh.
Jirka, oo lagu tilmaamayo qalajiyo qaar leh qadar yar oo casiir ah, ayaa daboolaya jilicsan, wax yar oo aan aheyn, maqaar dhalaalaya.
Midabka midhaha ka hor intaadan ka qaadin geedku waa cagaar, ka dib marka uu boogteynayo maqaarka wuxuu helayaa midab dahabi ah oo jaale ah.
On maqaarka ee tiro badan caleemaha subcutanous cagaaran si cad u kala duwan. Geedka madoow ee ku jira noocyada yaryar ee noocyada la xidho ayaa yar yar, abuurka dhaadheer.
Isteroberi ayaa lagu hayaa laanta iyadoo la isticmaalayo caws gaaban oo gaaban.
Noocan ah pear beerta waxa loola jeedaa noocyo kala duwan oo miro ah. Tani waxay ka dhigan tahay in miraha ay ku fiican yihiin isticmaalka aad u kala duwan - mid cusub, la qalajiyey, iyo waliba walxo cayriin ah oo soo saarka noocyo kala duwan, midho leh oo caafimaad leh, caano, jelly, marmalades, macmacaanka.
Waqtiga qaan-celinta macaamiisha, uurjiifku wuxuu si caddaalad ah u qaataa dhadhan macaan oo udgoon ee macaan ee macmacaanka.
Qaar ka mid ah khasaarooyinka "Perun" waa dareenka markaad cunaysid cuncun ba'an oo dhacaya sababtoo ah niyadjab la'aan.
Kiimikooyinka caanaha u bislaaday waxay ku jiraan qaybtan:
Acids titrated 0,45%
Ascorbic acid 5.8 mg / 100 g
Tannins 58 mg / 100 g
Xeryaha P-firfircoon 58 mg / 100 g
Geedka miraha fasalka la cayimay wuxuu bilaabaa 4-5 sano kadib markaad beerto.
Geedka weyni wuxuu soo saaraa wax-soo-saarka joogtada ah, taas oo lagu garto qiyaasta dhexdhexaadka ah.
Gaar ahaan, beerta beeraha Altai - dhulkii "Perun" - celceliska celceliska dhirta geedka illaa 18 kg.
Xaaladaha Siberia badweynta Perun waxay muujisaa adkaysiga qaboobaha jilicsan, inkasta oo ay ka hooseysaa kii hore ee Siberian ee "Lukashovka" oo lagu beddelay parameter-ka la cayimay.
Dhanka kale dhacdo gaar ahaan qoryaha casriga ah ayaa yarayn kara. Sidaa darteed, marka noocyada taranta "Perun" waxaa lagu talinayaa in ay bixiyaan taxadar gaar ah xaaladaha cimilada xaaladaha ee meesha of beerto qorshaysan.
Gobolladaas, noocyo pear ah ayaa si guul leh koray: Tonkovetka, Sverdlovchanka, Severyanka, Feeriya iyo Severyanka guduudan.
In kasta oo xaqiiqda ah in "Perun" loo duudduubay beerashada inta badan ee gobollada Siberian, tanina kama joojineyso in ay ahaato mid dhirta kulaylka jecel. Sababtan awgeed Beerto geedo waa in lagu sameeyaa meel wanaagsan oo la ilaaliyo.
Ma aha inay noqdaan kuwo xooggan iyo biyo dhulka ku dhow dusha dhulka. Iyo ugu muhiimsan - ee meeshan waa in ay noqdaan badan oo qorraxda.
Mugdiga cufan ee dagan ayaa noqon doona waxay gacan ka geystaan ​​dhimista laanta yar yar ee aan-socodka lahayn oo aan u oggolaan doonin inay ka soo goosato dalagyada wanaagsan ee geedka.
Sida for qaabka ku haboon ee ciidda at goobta beerto, ugu chernozems, dhuuban ama dhoobo boodh ah waa suurad wacan. On basaska ciidda iyo dhoobo, beerashada pear waa suurto gal ah marka la samaynayo a godho beeri wanaagsan, aciditids hooseeyo iyo joogto ah (sanad kasta) bacriminta ciidda.
Under beeritaanka digo seedling qoto dheer oo qiyaastii 1 m iyo dhexroor 70-80 cm. Ilaa iyo xilliga soo degitaanka, godadka waa inay istaagaan gudaha 1-2 toddobaad gudahood.
Ka hor waa inay ahaato ku shub xal xal lime (2 galaas oo ah fluff 10 litir oo biyo ah). Ciidda laga soo saaro inta lagu guda jiro qodista waxaa lagu qasan yahay humus, ciid iyo superphosphate.
Iyada oo isku dar ah ciidda, xididdada ee seedling waxaa lagu shubay inta lagu guda jiro beeritaanka. Iyada oo taasi Qoorta xididka waa inuu tagaa 5-7 cm dhulka.
Geedka geedka sidan loo beeray 3-4 cm oo ah mashiinka dhuumo dhuuban ee dhuuban ayaa qaabeeya goobo u dhow xarafka oo leh 35-40 cm.
Hooska ayaa la sameeyay ku shub 2-3 baaldiyo biyo kala gooni ah. Ka dib markii ay qoyaan, qoyaan Daadi mulchka humus qalalan (2-3 cm).
Daryeelka khudaarta saxda ah ayaa soo jeedinaya waraabinta joogtada ah ee qoryaha (sida wakiil ka ah noocyada Siberian, "Perun" waxay u baahan tahay waraabin dheeraad ah xagaaga hore), Bacriminta ciidda ee haboon, iyo sidoo kale manjooyin karti leh.
Manjada ugu horeysa waa in la sameeyaa on seedlingkuwaas oo siin doona mustaqbalka taajka saxda ah iyo hubinta horumarka caadiga ah.
Intaa waxaa dheer, geedaha qaangaarka ah waxay u baahan yihiin manjooyin guga si loo soo saaro laamihii dhintay iyo ka baxa.
Caleen "Perun" caadiyan aad u wanaagsan oo ka soo horjeeda cudurada fangas.
Cudurada u adkaysta noocyo of isteroberi: Chudesnitsa, Chizhovskaya, Skorospelka ka Michurinsk, Moscow hore iyo quruxda Oryol.
Sida laga soo xigtay aragti ah ee bannaanka, dhaqanka this ku dhowaadaa ma xanuunsado. Kala duwanaantu waxay u adkaysaa cayayaanka badan.
Si kastaba ha ahaatee, haddii ay jirto rabitaan ah in si dheeraad ah looga ilaaliyo dhirta ka soo jeeda jilicsan iyo qoraxda, shtamb iyo laamaha qalfoofka waxaa lagu dhiirigelinayaa in ay ku duubaan qalab kasta oo gacanta ah.
Cayayaanka ayaa si fiican u caawin doona mulinka lime, kaas oo lagu daaweeyo jirridda geed.
Iyadoo si taxaddar leh iyo fulin mas'uuliyadeed oo dhan sharciyadan aasaasiga ah ee fudud, waxaad ku tirin kartaa pear si ay ugu mahad celiso milkiilaha leh dalag aad u fiican.